Home Wararka Farmaajo ciidan uma diri karo Garowe iyo Kismaanyo laakiin Baydhabo sidii uu doono...
Farmaajo ciidan uma diri karo Garowe iyo Kismaanyo laakiin Baydhabo sidii uu doono ayuu ka yeeli karaa?
Shacabka reer Koonfur Galbeed ayaa si isku mid ah uga soo horjeestay qorshaha la doonayo in shacabka reer Baydhabo lagu qasbo in ay doortaan musharax ayan raali ka ahayn. Xildhibaan Fanax iyo Xildhibaan Adan Madoobe oo ka mid ahaa xidhibaano maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa ugu baaqay dowladda Fedaraalka in ciidanka ay keentay Baydhabo ay dib ula noqoto.
Siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ayaa ku eedeyay MW Farmaajo in uu doonayo in uu xoog ku qabsado dadka iyo deegaanka Koonfur Galbeed iyada ujeedada tahay in beesha uu ka dhashay ee Mariixaan ay xoog kula wareegto hogaanka degaanka Koonfur Galbeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa horay isugu dayay dhowr farsamo uu ku doonayay in uu Cabdicaasis Lafta Gareen uga dhigo Madaxweyne laakiin waa uu ku fashilmay qorshayaashaa hadda waxa uu qaaday tilaabadii ugu danbeeysay oo uu doonayay in xoog uu kula wareego shacabka Koonfur Galbeed oo si cad uga soo horjeestay qorshahiisa.
Previous articleXaalada Magaalada Baydhabo oo kacsan ka dib markii ciidan ka amar qaata Sadaq Joon la geeyay
Next articleXildhibaano Baydhabo Shir Jaraa’id ku qabtay oo ku baaqay in dib loo celiyo Ciidamo Saadaq Joon geeyay!!
Duqeeyn ka dhacday deegaano u dhaw Baladweeyne!!
(Wararkii ugu danbeeyay) Joe Biden oo sii xoojiyey hoggaamintii Gobolo muhiim...